Malunga nathi-Ubomi beBogger (amabali ebuntwaneni beBhola ekhatywayo kunye neziBalo zeBhayiloji)
Wamkelekile kwi LifeBogger! Ikhaya leNqaku leNqaku leBhola yeBhola.
Abadlali bebhola abaqeqeshiweyo, abaphathi bebhola kunye nabadlali abancinci banamabali okuBantwana kunye neBiography yeNqaku. I-LifeBogger ibamba la maxesha angalibalekiyo omnandi kwaye achukumisayo.
Iqonga lethu libonelela ngeyona nto ibalulekileyo, emangalisa kwaye inomdla kumabali oBuntwana kunye neNgcaciso yeBhayibhile yeBhola yeBhola ekhatywayo (esebenzayo / edla umhlala phantsi), abaphathi bebhola kunye nabadlali abaphambili. Sigubungela imicimbi ebalulekileyo ukususela ngexesha lobuntwana babo ukuya kuthi ga apho baziwa.
Kuyamangalisa ukubona indlela abaqhubi bebhola, abaphathi kunye neelites ezikhula ngayo kubantwana abahle ukuya kwiingcali. Injongo yethu kukujonga kweziganeko ezenzekileyo kubomi bezi zinto buqu, ezo sele zibekade ziqonda emva koko.
Umsebenzi wethu: Ukuba phakathi kweMithombo yeDijithali eyiNgcali yaMabali eeNtsana zeNtsholongwane kunye namanqaku e-Biography.
I-LifeBogger izabalaza ukuba phakathi kweqonga lomdlalo webhola ekhatywayo kwi-Intanethi amabali abantwana kunye ne-Untold Biography Facts yebhola ekhatywayo (bobabini bayasebenza kwaye bathathe umhlala-phantsi), abaphathi kunye nabadlali abaphambili bebhola.
Ngokwenza oko, siqinisekisa ukubonelela abafundi bethu abaxabisekileyo ngomxholo omkhulu (ixabiso le-premium) eliya kubenza babuye ngaphezulu.
Amanqaku ethu aqukethe uhlalutyo olupheleleyo lwebhola labo / abaphathi / abomi bokuqala bokuqala, imvelaphi yosapho, ubomi bokuqala kwekhosi, indlela / ukunyuka ukuba nolwazi lwe-biography, ubomi bentsapho, ubomi bobuhlobo, ubomi bobuqu, indlela yokuphila kunye nezibakala ezingachazwanga.
Injongo yethu: Ukwenza kunye nokugcina indawo yokugcina eyidijithali yabathandi bebhola.
Kuthelekelelwa ukuba ngaphezu kwesiqingatha sabemi behlabathi bazigqala njengabalandeli bebhola ekhatywayo (abalandeli bebhola ekhatywayo) okanye abalandeli. Oku kuthetha ukuba abantu abazizigidi ezi-4 zehlabathi babukele ibhola yeyona midlalo ithandwa kakhulu kwihlabathi.
Ngelixa singenzi iindaba zokuphula ibhola okanye sinike amanqaku akutshanje okanye aphezulu i-10s, injongo yethu kukugcina ibali lomntwana webhola ekhatywayo kunye nembali yebhayiloji yalowo nalowo fan.
Ubomi bethu bebhola ekhatywayo kunye nebhayoloji yethemba sinokunika abalandeli bebhola ulwazi olongezelelekileyo malunga nabadlali abanomdla kubo yonke imihla yomdlalo kwiTV. Ke, ayisiyonto yokubukela ibhola kuphela kodwa ukuyifunda.
Amaxabiso ethu: Umxholo okwinqanaba kunye nePastor.
Umxholo Wemigangatho: I-LifeBogger izama ukubonelela ngomxholo obalaseleyo ohambisa ixabiso le-premium kubathandi bebhola kwihlabathi liphela.
Ukunyuka: Sikholelwa ukuba iBhola ekhatywayo (yeBhola ekhatywayo) inxulunyaniswa nomnqweno, imvakalelo, imincili kunye nokuzimisela. Yiyo loo nto, sizisa inkanuko ekubhaleni amabali ebhola ebuntwaneni kunye ne-Untold Biography Facts.
Inyani yile, ukubhala umxholo webhola kunye nokudala inkanuko kuthi kwasidla, kusenza sikholelwe ukuba nguCingo oluBalaseleyo.